ငါပေးပို့အပေါ်သို့ငွေသားပေးချေနိုင်ပါသလား? ငါခရက်ဒစ်ကဒ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ / ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင်ပိုက်ဆံ cc နိုင်သလား။
ယခုတွင်ငါသည်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆင်ရေးသာအကြွေး / debit card ကိုအရောင်းအများနှင့် Paypal ကန့်သတ်ထားပါသည်ဝမ်းနည်ပါသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်သူတို့ရဲ့စားသုံးသူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအရလည်းကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအတည်ပြုဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ အနာဂတ်မှာကျနော်တို့သော်လည်းပေးပို့အပေါ်သို့ငွေကိုလက်ခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များမဆိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုပါကဖြစ်ကောင်းသင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကပထမဦးဆုံးငွေပေးချေမှုနှင့်အတူသင်ကူညီရနိုင် :)
paypal ဝယ်သူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကမ်းလှမ်းပြီးလုံခြုံတဲ့တံခါးပေါက်များနှင့်အကောင်းပြန်အမ်းငွေမူဝါဒများပေးခွငျးအားဖွငျ့စားသုံးသူနှာ။ ကျွန်တော်ခရက်ဒစ်ကဒ်အန္တရာယ်များမရှိဘဲလုံခြုံစိတ်ချစွာဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာပြီးစီးရန် Paypal ကိုအသုံးပြုပြီးထောက်ခံအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦး Paypal အကောင့်ရှိပါကရုံ Paypal ဖြင့် checkout နှင့်အညီသင့်ဝယ်ယူမှုကိုဖြည့်စွက်ရန် login ။
ငါ Paypal အကောင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်အဘယ်အရာ ?!
သငျသညျပေးဆောင်ဖို့ PayPal က account ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအဖြစ်မစိုးရိမ်: သင်တိုက်ရိုက် PayPal ကမှာသင့်ရဲ့အကြွေးဝယ်ကဒ်ရဲ့ဒေတာကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်သင့်ငွေပေးချေမှုကိုပြီးစေနိုင်သည်။ သငျသညျမတစ်ဦးအား PayPal account တစ်ခု register လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး.
1) အကယ်စင်စစ် "debit ဒါမှမဟုတ် credit card ဖြင့်ငွေပေးချေ" ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရွေးစေ
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသင့်ရဲ့ PayPal ကစာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုပါလျှင်ပဲ "မြီသို့မဟုတ် Credit Card ကိုအတူငွေပေးချေ" ပေါ်တွင် click လုပ်သို့မဟုတ် "တဲ့ဧည့်သည်အဖြစ်ထွက် Check" ။
2 ။ သင့်အကြွေးဝယ်ကဒ်ရဲ့ Data ENTER
လိပ်စာ, အီးမေးလ် & ဖုန်းနံပါတ်လည်းသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အပေါ် မူတည်. မေတ္တာရပ်ခံနိုင်ပါသည်။
သင်ပြုသောအခါအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Continue" ။
3 ။ "NOW ကလစာ" ကိုနှိပ်ပါ
4 ။ Paypal အကောင့်ဖန်တီးခြင်းအကြောင်းကိုမေးတဲ့အခါ "NO, ကျေးဇူးတင်စကား" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သင့်မှာယူမှုပြီးဆုံး!
DONE! သင်မကြာမီသင်၏ဝယ်ယူမှုကိုအတည်ပြုရန်သင့်ယူမှုအတည်ပြုချက်အီးမေးလ်များရရှိလိမ့်မည်! Shopping ပျော်မွေ့ :)
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လာသည့်မူဝါဒကြာ သင်ထုတ်ကုန်ကိုလက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ 30 ရက်ပေါင်း (IE ကိုသင့်ဒေသခံစာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုကနေကျော်လက်မှတ်ထိုး) ။ 30 ရက်ပေါင်းကတည်းကလွန်ကြလျှင်, ကံမကောင်းငါတို့သည်သင်တို့တစ်ပြန်အမ်းငွေသို့မဟုတ်လဲလှယ်မပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
ယင်းပြတ်ရွေ့ကျွန်တော်တို့ကို (ဆိုက်ရောက်အပေါ်တက်ရင်, ထရော) ရက်နေ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့သင်တန်းပြန်လာရေကြောင်းများအတွက်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ် :)
တစ်ပြန်လာဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်, သင့်ကို item အသုံးမပြုနှင့်သင်ကလက်ခံရရှိကြောင်းတူညီတဲ့အခြေအနေဖြစ်ရပါမည်။ ဒါဟာအစမူလထုပ်ပိုးအတွက်ဖြစ်ရပါမည်။သင့်ရဲ့ပြန်လာဖြည့်စွက်ဖို့ကျနော်တို့ဝယ်ယူတဲ့ပြေစာသို့မဟုတ်အထောက်အထားလိုအပ်သည်။နောက်ကျောထုတ်လုပ်သူမှသင်၏ဝယ်ယူမှုကိုမပို့ပါ။ ပြန်လာစာပို့ခစရိတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါပါဘူးပေးပါ။ ကျနော်တို့အပြည့်အဝစုံစမ်းရေးကော်မရှင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံမှုအဖွဲ့သည်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းအကြံပြုကြဘူး။
အမိန့်ပြန်သွားစစ်ကြောင်းအဘို့, ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်အဆက်အသွယ်ပုံစံကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့အမိန့်များဝယ်ယူအပေါ်သို့, သင်သည်သင်၏အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့အထိ 24 နာရီရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ 24 နာရီအတွင်းသင့်ရဲ့အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်လျှင်ကျနော်တို့အပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေပေးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအမိန့်ကိုဖန်ဆင်းကတည်းက 24 နာရီလွန်ပြီလျှင်သို့သော်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကိုပြန်လာနိုင်မီရောက်လာရန်သင့်အထုပ်အဘို့စောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့အပြန်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ငါတို့သည်သင်တို့၏ပြန်လာသောကို item ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းကိုသင်အကြောင်းကြားရန်သင့်အားအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ပြန်အမ်းငွေများ၏ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ခံရသင်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအတည်ပြုနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင့်ငွေပြန်အမ်းလုပ်ငန်းများ၌ပါလိမ့်မည်နှင့်ခရက်ဒစ်ကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုကုန်သည်ပေါ် မူတည်. ကာလ၏လူတယောက်ငွေပမာဏအတွင်း, သင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ငွေပေးချေ၏မူလနည်းလမ်းကိုအသုံးချလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်သင့်ရဲ့ပြန်အမ်းငွေကိုတရားဝင် posted ခင်ထို့နောက်သူကအချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။
Next ကိုသင်၏ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ပြန်အမ်းငွေ posted မီအချို့အပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်မကြာခဏဆိုသလိုရှိပါတယ်။
သင်သည်ဤသူအပေါင်းတို့ပြုသောအမှုဖွင့်ခြင်းနှင့်သင်ဆဲသော်လည်း, သင်၏ပြန်အမ်းငွေကိုလက်ခံရရှိကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်အဆက်အသွယ်ပုံစံကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
တစ်ဦးကစာတိုက်ကုဒ်တစ်ခုအမိန့်နေရာမဖြစ်မနေသော်လည်းငါသည်ငါ့တိုင်းပြည်တွင်တဦးတည်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး Q- ။ မည်သို့ဈအမိန့်နေရာနိုင်မလဲ?
သင့်ရဲ့လိပ်စာဟာစာတိုက်ကုဒ်ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင် A- ကြင်နာစွာ "11111" ရိုက်ထည့်ပါနဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်ရဲ့အမိန့်ထားပါ။ ဤနည်းကျနော်တို့ထည့်သွင်းရန်အဘယ်သူမျှမစာတိုက်ကုဒ်ရှိကွောငျးသိရကြလိမ့်မည်
အမိန့်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့တင်ပို့မတိုင်မီလုပ်ဆောင်ပေးရန်5ရက်ပေါင်းအထိကြာ - တနင်္ဂနွေနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များဖယ်ထုတ်ပြီး။ ကြိမ် processing အားလပ်ရက်စဉ်အတွင်း 14 ရက်ပေါင်းအထိကြာလိမ့်မည်။
သင်္ဘောတွင် TIME ဘယ်လောက်ကြာပါမလဲ
အမေရိကန်အမိန့် USPS ကနေတဆင့်တင်ပို့မည်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအမိန့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကနေပွညျ့စုံစင်တာပေါ် မူတည်. တင်ပို့ပါလိမ့်မည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကူးအပြောင်း Times သတင်းစာ:5- 20 စီးပွားရေးရက်ပေါင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ Transit ကြိမ်: 10 - 21 စီးပွားရေးရက်ပေါင်း
ပျမ်းမျှအကူးအပြောင်းကြိမ်3ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းရရှိခဲ့ကြသည်။
ရေကြောင်းရွှေ့ဆိုင်းစေခြင်းအလိုငှါထိန်းချုပ်မှုထဲကဖြစ်ကြောင်းခွအေနမြေား (သဘာဝဘေးအန္တရာယ်, အားလပ်ရက်, ရာသီဥတု, etc) ရှိပါတယ်။ အများဆုံး packages များအချိန်ပေါ်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သယ်ဆောင်တွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါအခွအေနနှင့်နှောင့်နှေးရှိပေမည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျနော်တို့အတိအကျပေးပို့အချိန်အာမမခံနိုင်ပါဘူး, ပေးပို့ကိစ္စကိုရေကြောင်းကုမ္ပဏီ၏တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မတစ်ဦးကိုခြေရာခံ NUMBER ကိုခံရကြလတံ့?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်သုတေသနအဖွဲ့ကအရည်အသွေးအသေးတတ်နိုင်ထုတ်ကုန်များအတွက် source ဖို့အချိန်သုံးစွဲအဖြစ်တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးချင်းစီထုတ်ကုန်ကမ္ဘာအနှံ့ကွဲပြားခြားနားသောပွညျ့စုံစင်တာများအနေဖြင့်တင်ပို့နိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက်ခြေရာခံပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနေစဉ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ packages များအပေါ်အပြည့်အဝအာမခံထားနှင့်မည်သည့်ပျောက်ဆုံးပစ္စည်းများသည်သင်တာဝန်ခံအခမဲ့ reshipped လိမ့်မည်။
ဘယျအရာ Courier ပေးပို့အသုံးပြုလိမ့်မည်
အဆိုပါဆက်သားဝန်ဆောင်မှုအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွညျ့စုံစင်တာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်သင်ကအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအရကြောင်းသေချာစေရန်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများကရင်းမြစ်ထားတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Courier န်ဆောင်မှုတိုင်းပြည်ကနေတိုင်းပြည်ခြားနားသည်။ အဆိုပါဆက်သားဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်မပါဘဲကျွန်ုပ်တို့ထိုကဲ့သို့သောဒီတော့ထွက် Amazon နဲ့အဖြစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးမှမဆုံးရှုံးမယ်လို့မြန်နှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အရှင်စျေးသက်သက်သာသာနှုန်းထားရယူနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ငါ 1 ITEM ခုထက်ပိုအမိန့်, ငါ ONE ITEM ခုကွောငျ့သာလက်ခံဖူးသလော
ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ပစ္စည်းရဖို့မြင့်မားသောအခွန် / ပရီမီယံပေးဆောင်ရန်မလိုပါကြောင်းဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အဆုံးအပေါ်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချဖို့အတတျနိုငျဆုံး! သငျသညျမျိုးစုံပစ္စည်းများကိုအဘို့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအမိန့်ကိုနေရာချလျှင်ဖွယ်ရှိတစ်ဦးထက်ပိုအထုပ်ထဲမှာတင်ပို့ခံရဖို့သွားထက်ပိုပါတယ်။ ရောက်လာရန်သင့်ပစ္စည်းများအားလုံးအတှကျအခြို့သောအချိန်ကိုခွင့်ပြုပေးပါ။
ငါထုတ်လုပ်မှုဆို Tariff OR CUSTOM အခွန်ပေးဆောင်စရာလိုပါသလား
သင့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလက်ခံရရှိအပေါ်ထင်ရှားစျေးနှုန်းများ စေခြင်းငှါ, သငျသညျအမိန့်အဘယျသို့ကနေမတူညီတဲ့ဖြစ်ပေမယ့်စိတ်ပူစရာမလိုကျေးဇူးပြုပြီး! များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွညျ့စုံစင်တာလုပ်ပေးမယ်လို့အဘယ်အရာကိုအလွန်အမင်းနိမ့်စျေးနှုန်းတွေအဖြစ်အထိမ်းအမှတ်သို့မဟုတ်လုံးဝလက်ဆောင်များအဖြစ်ပစ္စည်းများ mark ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအပိုဆောင်းစွဲချက်အလွန်အဘိုးထိုက်သောများမှာအချို့သောနိုင်ငံများအဘို့အဖြစ်သင့်အဆုံးအပေါ်မြှုတ်ခံရအခွန် / ထုံးစံသွင်းကုန်လုပ်ငန်းတာဝန်များတားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်နေတာလဲဘယျအရာ ... ငါအမိန့်ထားရှိဒါပေမဲ့ငါအတည်ပြုချက်အီးမေးလ်မရဘူးလား?
သငျသညျအမိန့်နေရာအခါ, သင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုမှန်ကန်သေချာအောင်ပေးပါ။ ကြင်နာစွာသင့်ရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုအီးမေးလ်ကအဲဒီမှာစလှေတျခဲ့လျှင်ကြည့်ရှုရန်သင့် SPAM folder ကိုစစ်ဆေးပါ။ အဘယ်သူမျှမအတည်ပြုချက်အီးမေးလ်နေဆဲလည်းမရှိလြှငျ, ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်အဆက်အသွယ်ပုံစံကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုအဖွဲ့သည်အီးမေးလ်ပို့ပါ
ငါငါ့ပညတ် / ADDRESS ကို, CAN ငါပြောင်းလဲချင်?
ကျွန်တော်အလွန်အမင်းကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအမိန့်အားမရဖို့ကြိုတင်သငျသညျကို double စစ်ဆေးမှုများအရွယ်အစားနှင့်လိပ်စာများကိုအားပေးသော်လည်းကျနော်တို့အပြည့်အဝအမှုအရာထလာနှင့်အမှားတွေလုပ်စေနိုင်သည်နားလည်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့နေရာချကြသည်ထိုနေ့အမိန့်ကို process ။ အပြောင်းအလဲတစ်ခုသင့်ရဲ့အမိန့်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်အဆက်အသွယ်ပုံစံကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ASAP နှင့်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲထားရှိရန်အတတျနိုငျဆုံးလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလည်းဘယ်ကတိတော်များကိုလုပ်မပေးနိုင်ပါ။ ပစ္စည်း (s) ကိုပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွညျ့စုံစင်တာကနေတင်ပို့ခဲ့ပြီး အကယ်. ကျွန်ုပ်တို့သည်အမိန့်အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်လို့မရပါဘူး။ ထိုကိစ္စတွင်, သင်အနီးဆုံးဒေသဆိုင်ရာဂိုဒေါင်မှမှားကို item ပေးပို့နှင့်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တစ်ဦးကိုဆုံးကို item ထွက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်လက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကနေအနီးဆုံးဒေသဆိုင်ရာဂိုဒေါင်ရှိရာထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ငါသည်သင်တို့တစ်ဦးက Holdings GET ပါပုံ, ငါ့ပညတ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သေးဒီမှာအဖြေမဟုတျကွောငျးသင့် Store တွင်တစ်ဦးကမေးခွန်းဖူးပါသလော
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏မေးခွန်းများကိုမဆိုဖြေဆိုရန်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည် ကျေးဇူးပြု. :)